I-Panasonic Lumix TZ200, i-15x zoom optical ne-4K video | Izindaba zamagajethi
URuben gallardo | | Isithombe
IPanasonic ingenye yezinkampani eziqhubeka nokubheja ngefomethi yekhamera ehlanganisiwe. Manje, kulezi zinsuku imvamisa iyinkontileka esezingeni eliphakeme enganikeza okuthile okungaphezu kwalokho izinzwa zamakhamera weselula ephezulu ezingakuvumela ukuthi ukwenze. Entsha IPanasonic Lumix TZ200 Ukubheja kokugcina, icompact compact, ebhejela ku-zoom enkulu ebonakalayo futhi ezokwazi ukuqopha ividiyo ngokulungiswa kwe-4K.
IPanasonic Lumix TZ200 entsha iyikhamera enzima. Umzimba wayo uphethwe izingcwecwe ze-aluminium ezicindezelwe ukwakha iphrofayili enhle futhi eqinile. Ngaphezu kwalokho, inokubamba okuncane kolunye lwezinhlangothi ukuze ukubamba kwekhamera kukhululeke kakhulu futhi kuvikeleke ngaso sonke isikhathi.
Okwamanje, lokhu I-Panasonic Lumix TZ200 ifaka inzwa ye-MOS eyodwa-intshi ngokulungiswa okuphezulu kwamamegaphikiseli angama-20,1. Okwamanje, i-lens yayo engama-24 mm ye-ultra-wide angle lens LEICA DC VARIO-ELMAR ene-5-axis stabilizer HYBRID OIS + izokwenza ukuthi izithombe zingafiphazi lapho sibambe ikhamera ngesandla. Ngaphezu kwalokho, ine- 15x zoom optical lokho kuzokuvumela ukuthi ufike noma kuphi.
Ngakolunye uhlangothi, ngemuva inesikrini sokuthinta esingu-3-intshi esilawula ngaso iningi lamapharamitha, futhi engxenyeni engenhla sinamakholi amaningi ukuze sikwazi ukufaka ngqo izindlela esizifunayo. Engxenyeni yevidiyo, lokhu IPanasonic Lumix TZ200 izokwazi ukuthwebula iziqeshana ze-4K, okuthile okuyimfashini kakhulu emkhakheni. Futhi, uma uthanda izithombe ezinkulu, le khamera izothola imiphumela emihle emabangeni angafika kumasentimitha ama-3.
Ukuqhubeka nokuqinisekisa isimo sakho sesihambi nesokuzijabulisa, iPanasonic Lumix TZ200 inokusebenza ukuhlela izithombe ngqo kusuka kwikhamera ngaphandle kwesidingo sekhompyutha. Ekugcineni, futhi ukuze ngikwazi ukuxhuma kwi-smartphone noma kuthebhulethi, leli lungu elisha lePanasonic linayo Ukuxhumeka kwe-Bluetooth ne-WiFi. Izothengiswa ngoMashi ozayo kanti intengo yayo izokuba ngu- $ 799,99. Okwamanje asinazo izindaba mayelana nentengo eSpain.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Isithombe » IPanasonic Lumix TZ200, i-15x zoom optical nevidiyo ye-4K
I-HomePod ishiya amabala amhlophe kwifenisha kanti i-Apple iyakuqinisekisa
I-Google ichaza ukuthi i-Chrome block blocker entsha isebenza kanjani